लाखौं मानिसहरू, नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारहरू धन्यवाद सफल, एक सय वर्ष बाँच्न मौका। तर यो उमेर मा, सबै भन्दा मान्छे - पहिले नै पुरानो रोगबाट बोझ। एउटा सक्रिय, स्वतन्त्र यसलाई आफ्नो पछि वर्ष मा मान्छे बनाउन सम्भव छ थियो, र जीवन विस्तार रमाइलो गर्न हर कारण थियो?
चलिरहेको धेरै वर्ष को लागि यस मुद्दा, शिक्षाविद् व्लादिमीर Skulachev मा, अनुसन्धान वृद्ध कक्षहरूको संयन्त्र बुझ्न र यसलाई अक्षम गर्न प्रभावकारी तरिकामा पत्ता लगाएर उद्देश्य छ। "MitoVitan" समीक्षा नेटवर्क विरोधाभासपूर्ण छन् - काम वैज्ञानिकहरु को धेरै वर्ष को परिणाम एक विरोधी-बुढ्यौली सिर्जना गरेका रूपमा, एक क्रांतिकारी घोषणा।
सदस्य सक्रिय उपकरण छ कसरी बुढ्यौली विरुद्ध लड्न प्रभावकारी रुचि राख्नुहुन्छ। युवा को विस्तार को विषय धेरै excites।
द्वारा वैज्ञानिकहरू उत्पादन सिर्जना - विरोधी उमेर बढन सीरम cosmetology मा प्रयोग गरिन्छ। शरीर मा कुनै प्रमुख परिवर्तन यसलाई फरक छैन। को जवान पर्यटकहरू धेरै छ तर पनि अनुहार विस्तार गर्नुहोस्। विशेष गरी गहिरो, त्यसैले भनिन्छ नकल झुर्रियाँ एक खोने युद्धमा लडिरहेका जारी थकित भएकाहरूलाई बीचमा। उपकरण धेरै यसलाई किनेको र फाइदा लिए, तुरुन्तै उपलब्ध छ। कसरी उहाँलाई खरीददारहरू बोल्न?
विरोधी उमेर बढन सीरम "MitoVitan» (MitoVitan) को मास्को राज्य विश्वविद्यालय मा उत्पादन को विकास नाम एम वी Lomonosova। मुख्य सक्रिय पदार्थ उत्पादन SkQ1 एंटीओक्सिडेंट छ।
निर्माता अनुसार, यो घटक coenzyme Q10 भन्दा किनभने भित्र पस्नु र गहिरो कक्षहरू मा जम्मा गर्न आफ्नो क्षमता को धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू संदेह छन्। केही पनि बजार मा राखिएको उत्पादनहरु को सञ्जाल मा टिप्पणी तिनीहरूले अनुकूलन बनाएको र एक विज्ञापन सिर्जना गर्न उद्देश्य लागि फिट छन्, किनभने पढ्न लायक छैन भन्ने विश्वास गर्छन्।
अरूलाई तथापि, तिनीहरूले "MitoVitan 'को सीरम लागू मा अनुभवको बारेमा आवश्यक जानकारी पाउन सक्दैन गुनासो।
समीक्षा तेस्रो सुविधा गर्न अविश्वास व्यक्त। आखिर, कुनै एन्टि-वृद्ध सीरम वा क्रीम 20 वर्ष मुनिका एक केटी संग चालीस वर्ष महिला सक्रिय छैन।
प्रश्नहरु को एक धेरै कारण संभावित खरीदारों सीरम "MitoVitan"। उत्पादन समीक्षा राम्रो, अभाव खातामा पोस्ट विज्ञापन उपस्थिति लिन भने छन्। नेटवर्क प्रयोगकर्ता आशा सीरम, तर पनि धेरै शंका हुनुहुन्छ। अवस्थामा आमूल कायाकल्प अझै निश्चित छैन।
उत्पादन को फाइदा र बेफाइदा मा
महंगा उच्च प्रविधी फाइदा र बेफाइदा को एक नम्बर भएको अर्थ - पहिले नै उत्पादन प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूबाट धेरै, यो सीरम "MitoVitan" भनेर विश्वास छ।
लाभ यसको undoubted प्रभावकारिता समावेश गर्नुहोस्।
कमीकमजोरी बीचमा धन, उच्च मुल्य र विशिष्ट, धेरै सुखद छैन गन्ध को आवेदन परिणामस्वरूप जकडन को एक भावना उल्लेख गरे।
धन को प्रयोगमा छाप
केही प्रयोगकर्ताहरू छांछ प्रयोग कारण विस्तार आफ्नो छाप, साझेदारी:
स्थिरता कसैले पनि पातलो देखिन्छ;
यसलाई नराम्ररी गंदा, र यो छाप छाला को जकडन को भावना द्वारा प्रबलित छ;
यो उत्पादन एकदम dries को प्रभाव अन्तर्गत किनभने अतिरिक्त एक मइस्चराइजिंग क्रीम लागू गर्न छाला गर्न सीरम लागू मनमोहक हुनेछ पछि;
थप क्रीम, जकडन बढ्छ को भावना प्रयोग बिना राती सीरम राख्न भने, तर बिहान यो जान्छ, र अनुहार धेरै ताजा र rejuvenated देखिन्छ।
सदस्य विरोधी उमेर बढन प्रभाव मा एक कमी उल्लेख गर्दा मइस्चराइजर सीरम भन्दा लागू गरियो। त्यसैले, लेखक समीक्षा निष्कर्षमा पुग्न, कार्यरत निर्देशन अनुसार कडाई हुनुपर्छ साधनहरुलाई।
खरीदारों आफ्नो समीक्षा मा निर्देशनहरू, सख्त प्रदर्शन आवश्यकताहरु कार्य को माध्यम को दक्षता बढ्छ जो नेतृत्व।
एक Skulachev आयनों SkQ1 को निर्माण मा प्रयोग कस्मेटिक सीरम "MitoVitan", अवशोषित सम्म moistened छाला र आँखा सफा गर्न मालिश लाइनको दिशा मा लागू गर्नुपर्छ।
यसलाई हल्का massaging र Clap आन्दोलन प्रयोग गर्न सम्भव छ। तिनीहरूले मांसपेशीमा आराम हुनेछ, संरचना को एक गहिरो प्रवेश गर्न योगदान र रक्त प्रक्रिया, oxygenate Tissues बढावा हुनेछ।
सुकाउने छांछ तपाईंको छाला क्रीम कोर धारण गरेपछि अपर्याप्त चिस्यान (जकडन को अनुभूति) छ भने, यो आवश्यक छ। सीरम "MitoVitan" बाहिर जा वा सुत्न जानुअघि 15-20 मिनेट 1-2 पटक एक दिन, बिहान र साँझ, 10 दिन भित्र प्रयोग गरिन्छ।
सीरम को प्रयोगबाट पहिलो परिणाम - कायाकल्प र अनुहार झुर्रियाँ को कमी (यति प्रयोगकर्ता लेख्नुहोस्) को प्रभाव - दोस्रो वा तेस्रो महिना मा एक कारक बन्दछ।
सारा अनुहार को छाला लागू गर्दा प्याकेज प्रयोग एक महिनाको लागि पर्याप्त हुन सक्छ। तपाईं मेकअप केही जस्तै, केवल, तर पनि समस्या क्षेत्रहरूमा पनि निधारमा को छाला, टी। ई मा आँखा वरिपरि लागू भने, यो3महिनाको लागि रहन्छ कि। फलस्वरूप, 80% मा दुई महिना पछि गहिरो झुर्रियाँ जानुहोस्।
खरीदारों सन्तुष्ट सीरम प्रदर्शन हो, तर उत्पादन को अप्रिय औषधीय गन्ध विचार, तर यो छाला रहने छैन याद गर्नुहोस्।
2.800 rubles - धेरै लागि दबाइ को लागत पनि उच्च छ।
लेखक को सीरम को प्रभाव बारेमा इन्टरनेट जानकारी टिप्पणी को अभाव, साथै यसको प्रभावकारिता को प्रयोगात्मक पुष्टि याद गर्नुहोस्।
यसको लेखक, निर्माता: धेरै उत्पादन को सृष्टिको इतिहास सिक्न थप हेर्न चाहन्छु।
तलको लेख मा प्रस्तुत जानकारी, अंतर भर्नुहोस्।
"आयन Skulachev" (SkQ1) मा आधारित उत्पादन
विकासकर्तालाई अनुसार, सीरम "MitoVitan" एक उत्पादन हो जो शिक्षाविद् Skulachev को लागू उपलब्धिहरू। धेरै मानिसहरू मिडिया मा बारेमा सनसनीपूर्ण प्रकाशन सम्झना। मतलब, जो को "Skulachev आयनों" को निर्माण मा आधारित राखिएको, cosmetology मा एक क्रांतिकारी सफलता रूपमा अवस्थित थियो। होनहार अनुसन्धान दुई उत्पादन, जो लामो अवधि मा एक महान भविष्य अपेक्षित छ को उत्पादन को सैद्धान्तिक आधार बन्यो। ती हुन्:
कस्मेटिक "MitoVitan» (MitoVitan)।
परियोजना को लेखक
व्लादिमीर Petrovich Skulachev (मास्को मा 21.02.1935 जन्म।) - सोभियत र रूसी वैज्ञानिक र जैव रसायन विज्ञानी, विज्ञान को सोभियत संघ एकेडेमी, विज्ञान को सोभियत संघ एकेडेमी, जैविक विज्ञान को डाक्टर को शिक्षाविद् को अनुरूप सदस्य।
2002 मा व्लादिमीर Skulachev स्थापित जैव सूचना विज्ञान र मास्को राज्य विश्वविद्यालय को बायो-इन्जिनियरिङ संकाय, यो दिन आफ्नो को डीन छ।
यसलाई आफ्नो अनुसन्धान, प्रकाशनहरू र मानव शरीर को उमेर बढन विजयी उद्देश्य सार्वजनिक बयान गर्न लोकप्रियता धन्यवाद प्राप्त गरिएको छ।
धेरै वैज्ञानिक कागजात को लेखक, उच्चतम राज्य पुरस्कार को उम्मेदवार।
रूसी जीवशास्त्रीहरूको बीचमा उच्चतम दृष्टान्त सूचकांक थियो।
सीरम बुढ्यौली प्रक्रियाहरू दखल
"MitoVitan SkQ 1" वृद्ध प्रक्रिया दखल हस्तक्षेप सीरम को दुनिया मा पहिलो हो।
यो एक नवीन कम्पनी "Mitoteh" द्वारा मास्को राज्य विश्वविद्यालय एम वी Lomonosova पछि नाम विकास र समर्थित थियो।
हस्तक्षेप (ल्याटिन interventio -। "हस्तक्षेप") - मानव जीन तल राखे कार्यक्रम को जैविक उमेर बढन बाधा गर्न मात्र तरिका हो।
यो कार्यक्रम को कार्य अन्तर्गत mitochondria (ऊर्जा स्टेशन) उमेर संग कोशिकाहरुमा मुक्त कण र विषाक्त फ्युजन प्रोटीन को उत्पादन वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप, यस जीव को पहिले उमेर बढन र मृत्यु को लागि अग्रणी परिवर्तनहरू हिमस्खलन क्यासकेडिङशैलीपाना बढ्न, oxidative प्रक्रियाहरू समयमा भङ्ग। यी परिवर्तनहरू सेल संरचना सबै विषय हो।
उत्पादन को MitoVitan सुविधा, अवरोध सेल बुढ्यौली प्रक्रिया रोक्न यसको क्षमता छ।
अभिनव: एंटीओक्सिडेंट दिशात्मक
सीरम MitoVitan mitochondrial organelles को स्तर मा सेल बुढ्यौली प्रक्रिया रोक्छ। एंटीओक्सिडेंट दिशात्मक SkQ1 सक्रिय पदार्थ को एक नयाँ वर्ग को प्रतिनिधित्व - यो क्षमता प्रदान यसको मुख्य सक्रिय पदार्थ शैक्षिक अनुसन्धान रास वी पी Skulacheva को धेरै वर्ष को एक नवीन उत्पादन हो। यो निर्माता को नाम भनिन्छ - "आयन Skulachev"।
को मास्को राज्य विश्वविद्यालय तिनीहरूलाई को नेतृत्व अन्तर्गत। एम वी Lomonosova स्थापित र पुष्टि गरिएको छ 1 nanometer विज्ञापन को एक सटीकता संग कक्षहरूको mitochondria मा वितरण को एक मौलिक नयाँ भौतिक विधि द्वारा अत्यन्तै प्रभावकारी एंटीओक्सिडेंट SkQ1 छ।
SkQ1 कक्ष प्रवेश र मुक्त कण विरुद्ध लडाई मा आउँछ। यो आयन विच्छेद विषाक्त प्रोटीन को आफ्नो उपस्थिति ठाउँमा गठन मा - तिनीहरूले intracellular organelles को संश्लेषण अवरुद्ध। अन्य एंटीओक्सिडेंट प्रक्रिया सिर्जना अणु असामान्य शारीरिक गुण मा निर्भर छ, किनभने निर्णय यस्तो उठयो गर्न सक्दैन। प्रभाव अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रतिक्रिया, क्षति र apoptosis रोकन SkQ1 हुन्छ। शेष पारी को पुनर्जनन पक्ष मा हुन्छ (रिकभरी) कक्षहरू बुढ्यौली प्रक्रिया अवरोध।
cosmetology विकास लागि खोल्ने
दक्षता "आयनों Skulachev" वैज्ञानिक र नैदानिक अध्ययन को वर्ष पुष्टि SkQ1 ढिलो मदत, रोक्न वा शरीर Tissues को उमेर बढन उल्ट्याउन देखाएका छन्। हाम्रो छाला - दृश्य एक सौंदर्य बिन्दुबाट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कुनै पनि अन्य भन्दा छिटो वृद्ध सुरु जो शरीर, लागि हो। सारा शरीर अझै पनि एक राम्रो शारीरिक आकार, कहिलेकाहीँ बुढ्यौली को पनि पहिलो संकेत छ जब आफ्नो अनुहार समय, मा।
"आयन Skulachev" को विशिष्टताको मा
मुक्त कण (सक्रिय अक्सिजन प्रजाति) को गठन को स्थान - Skulachev खोल्ने विशिष्टताको अत्यन्तै प्रभावकारी एंटीओक्सिडेंट (हजार समयमा Coenzyme Q10 को दक्षता भन्दा ठूलो) रहेको, SkQ1 कक्षहरू मा penetrates र mitochondria मा accumulates, कि मा निहित।
सेल मा मर्मज्ञ, यो तिनीहरूलाई नाश, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो रिकभरी छ। SkQ1 को organelle सीमा छ। यसको उपस्थिति मुक्त कण को गठन रोक्छ र सेल बुढ्यौली संयन्त्र असक्षम गर्छ।
कारण अद्वितीय शुल्कको, SkQ को यो mitochondria एंटीओक्सिडेंट परिवहन सक्षम एक अणु को मात्र सिद्ध रुप हो।
"हाम्रो कक्षहरू को मोटर"
Mitochondria बाल्न र जीव लागि आवश्यक ऊर्जा जारी, पोषक oxidize शक्ति बिरुवाहरु एक प्रकारको छन्। तिनीहरूले सेल को "मोटर" भनिन्छ गर्न सकिन्छ। कारण कार्यक्रम वृद्ध समय एक व्यक्ति को जीन तल राखे पनि कार्यहरू गर्न उनको मुक्त कण (अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु) द्वारा नाश भइरहेको परिणामस्वरूप, जैविक सुरक्षा कक्षहरू एक कमी छ।
कसरी छाला को उमेर बढन गर्छ?
मुक्त कण को हानिकारक प्रभाव अन्तर्गत कक्षहरू र Tissues उमेर संख्या घट्छ।
- elastin र कोलेजन र polysaccharides, यसको चिस्यान संतृप्ति लागि जिम्मेवार छन् जो पदार्थ छाला को लोच लागि आवश्यक को कम उत्पादन: cellularity कम छाला, यसको क्षरण को Thinning गर्न जान्छ।
युवा उमेर पुनर्जनन (पुनरुद्धार) मा कक्षहरू र आफ्नो गुणहरू को इच्छित संख्या कायम गर्न पर्याप्त छ। छाला यसलाई elastin र अन्य तत्वहरू एक तरुण उपस्थिति कायम गर्न आवश्यक उचित रकम छ, एक महत्वपूर्ण मोटाइ छ। वृद्ध - उमेर संग, वहाँ एक ब्यालेन्स पारी सेल मृत्यु तिर छ।
हस्तक्षेप परिणाम "Skulachev आयनों"
"आयनों Skulachev" (SkQ1 को) वृद्ध कार्यक्रम अवरोध छ, कक्षहरूको ओक्सीकरण रोक्छ, apoptotic (मरिरहेका) तिनीहरूलाई बचाउँछ जो। उमेर बढन प्रक्रिया अवरूद्ध छ, र त्यहाँ पुनर्जनन (रिकभरी) को विस्थापन को दिशा मा ब्यालेन्स र यसैले कायाकल्प छ।
सीरम आधारित "MitoVitan" को आवेदन "आयन Skulachev (SkQ1)" - अर्को नयाँ र अझै पर्याप्त बुढ्यौली को संकेत लड्न अभ्यास तरिकामा लागू छैन। प्रयोगकर्ता कसरी आश्वस्त गर्न, सीरम साँच्चै एकदम गहिरो झुर्रियाँ कम गर्न मद्दत गर्छ। विकासकर्ताहरूले को आश्वासन मा, प्रत्येक उत्पादन सधैं जवान र सुन्दर रहनेछ।
को coolest टैटू
टाटु को उचित हेरविचार
सबै तरिका: कसरी साइट तथ्याङ्क हेर्न
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
क्यान्सर के पत्थर (महिलाहरु) राम्रो फिट?
यो दिल को लागि कि रेड वाइन गर्न उपयोगी छ? यो नली लागि कि रेड वाइन गर्न उपयोगी छ?
स्की पन्जा: डिजाइन सुविधाहरू, को छनौट लागि निर्देशन
फिल्म "अन Chien Andalou" स्पेक्टेटर मा चासो जगायो किन सौंदर्य आघात?
खाना पकाउने मिठाई "चेरी हिल": चरण नुस्खा, फोटो द्वारा चरण
बिजुली गिटार Cort: सिंहावलोकन मोडेल, सुविधा र समीक्षा